အမေ့ခံလို့ မရတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်များ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အမေ့ခံလို့ မရတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်များ
ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်သည် နိုင်ငံအတွက် အကောင်းများသာဖြစ်ခဲ့၏။ မြန်မာ့သမိုင်း စာမျက်နှာများမှ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်များကို မလိုတမာ လူတစ်စုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆွဲစုတ် ပြစ်ခဲ့ကြ၏။ သို့သော် စာရွက်များသာ ပြဲခဲ့ပြီး မြန်မာမွတ်ဆလင် သမိုင်းကတော့ ပျောက်မသွားခဲ့ပါ။
၁။ အနှစ် ၅၀ ကြာ သမိုင်းအမှောင်ချခဲ့သည့် ဆိုးကျိုး။
ယနေ့တိုင်ဖြစ်ပွားနေသော ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ၏ အခြေခံအကျဆုံး အကြောင်းအရင်းမှာ နှစ်ဖက်လူမျိုးစုများနှင့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာ့သမိုင်း၊ ရခိုင်သမိုင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ မှန်မှန်ကန်ကန် မသိရှိ၍ ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း ပင်ဖြစ် ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် နှစ်ရှည်လများ သမိုင်းအမှောင်ချခဲ့သည့်၊ (ဝါ) သမိုင်းကို ဆင်ဆာ လုပ်ခဲ့သည့် အကျိုးဆက်အဖြစ် လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုဟူသော ဆိုးကျိုးများ ပေါ်ပေါက် လာရပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယနေ့ အသက် ၆၀ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများနှင့် ထိုအသက်ထက် ငယ်သူတိုင်းသည် ၄င်းတို့၏ ငယ်ဘ၀ ကျောင်းသင်ခန်းစာများတွင် မပြည့်မစုံ ထိမ်ချန် ဖြတ်တောက် ပြုပြင်ထားသော မြန်မာ့သမိုင်းများကိုသာ လေ့လာခွင့်ရခဲ့သောကြောင့် ပြင်ပစာပေများ ဖြည့်စွက် မလေ့လာ ခဲ့လျှင် ဆရာကြီး ဦးသန်းထွန်းစကားဖြင့်ပြောပါက လူအ များဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပါသည်။
ထိုကြောင့် ပြည်သူအများ “မအ” ရလေအောင် ပြည့်စုံမှန်ကန်သော မူရင်းသမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် လက်ပွန်းတတီးရှိစေရန်နှင့် လက်ငင်းကမ္ဘာ့ အခြေအနေများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်စေရန် အတွက် (ဆဌမ သင်္ဂါံရတနာတင်ခြင်းနှင့် ဗန်ဒေါင်းစာချုပ်အ ကြောင်းပြောလျှင် ဦးနု၏အမည် ကို တမင်တကာ ချန်ထားလေ့ရှိသော၊ မြန်မာ့တပ်မတော် သမိုင်းပြောလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် အကြောင်းကို ချန်ထားလေ့ရှိသော၊ အာရဗ်နွေဦးကို မထုတ်လွှင့်သော်လည်း နိုင်ငံအ၀ှမ်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်ဆလင် အထိကရုံး ဖြစ်ရန်အတွက်ကိုတော့ လှုံ့ဆော်သော၊ ယနေ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အကြောင်း အပြည့်အဝမရေးသား မပြောဆိုသော၊ ဘင်္ဂံလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှိ်တ်ဟာစီနား၏ လတ်တလော အကြမ်းဖက်ခံရသော ဘင်္ဂံလားဒေရှ် နိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုပြောသော မိန့်ခွန်းနှင့် နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံများကို လုံးဝ မဖေါ်ပြသော) မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ဆင်ဆာ အဖွဲ့အပြင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၏ ဆင်ဆာအဖွဲ့များကိုလည်း အမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်း ပေးသင့်ပါသည်။
၂။ အရေးကြုံတိုင်း တနိုင်ငံလုံးကို ခြုံငုံဖိတ်ခေါ်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယိုမှပြောကြားသော ၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်းတွင် မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ခဲ့စဉ်က စုစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ညီညွတ်မှုအင်အားများအတိုင်း နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်း၊ တယောက်ချင်းစီက လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဆိုပါလျှင် ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို မလွဲမသွေ ကျော်လွှားနိုင်မယ် လို့ဆိုတယ်ခင်ဗျာ့။
အထွေအထူးဖိတ်ခေါ်စရာမလိုဘဲ မြန်မာမူဆလင် တွေဟာ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာ တာဝန်သိသိ ပါဝင်ခဲ့လို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက မြန်မာမူဆလင် များကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရုံမက ပြည်နယ်ပေးဖို့အဆင့်အထိ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာမွတ်ဆလင်များဟာ အမေ့ခံပုံရိပ်များဖြစ်ခဲ့ကြရလို့ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာ မြန်မာမွတ်ဆလင် ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ ပါခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်းကို တိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖေါ်ထုတ်ဖို့ အထူးလိုပြီပေါ့။
ကြုံသည့်အခိုက် ကြော်ငြာဝင်ချင်ပါသည်။ မြန်မာမွတ်ဆလင် သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စာပေ သမားများ အတွက် ကိုးကားလို့ရလောက်အောင် အထောက်အထားများနှင့် တကွ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မှတ်တမ်း တင်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုကတော့ M-Media Web Site (http://www.m-mediagroup.com) ဘဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ့။ သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို သမိုင်းတာဝန်ကျေသူများဟု ဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါချင်ပါသည်။
မြန်မာမွတ်ဆလင်များဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ဘယ်သူမှ ဖိတ်ခေါ်နေစရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ကိုယ် တာဝန်သိခဲ့ကြတာကိုက ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော သမိုင်းကို ပြည်သူများထံ ဖေါ်ထုတ်တင်ပြဖို့ တာဝန်ရှိပြီ။
ယခုအခါ စာပေစိစစ်ရေး အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကဏ္ဏအသီးသီးတွင် တိုးတက်ရန် လမ်းစများ ပွင့်သွားပြီဟုဆိုနိုင်သည့် အပြင် တရုတ်ထက် ခြေတစ်လှမ်း သာသွားပြီ ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ စာပေကင်ပေတိုင် ဖျက်သိမ်းသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကိုအောင်ထွန်း၏ ကျောင်းသား သမိုင်း စာအုပ်ကဲ့သို့ မြန်မာမွတ်ဆလင် သမိုင်းစာအုပ်ကိုလည်း အကိုးအကား ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် ပြုစုထုတ်ဝေဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်၏။
ထို့အပြင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်းသုံးမြန်မာ့သမိုင်းဖတ် စာအုပ်များပါ အထူးသဖြင့် ရခိုင်အင်ပါယာသမိုင်း၊ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်း နှင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု သမိုင်း ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန်လည်ရေးသားပြီး သမ္မတကြီး အသစ်ဖွင့်လှစ်ပေးမည့် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာဒေသရှိ ကျောင်းများတွင် သင်ကြားပေးသင့်ပါသည်။
သမိုင်းဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက် (Thesis/Dissertation) ကျမ်းပြုရာတွင် မြန်မာမွတ်ဆလင် တို့၏ လွတ်လပ်ကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း၊ ပုဂံခေတ်နှင့် မြန်မာမွတ်ဆလင်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှင့် မြန်မာမွတ်ဆလင် စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်များ ချပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစေမည်ဟု ထင်ပါသည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဦးနု၏ အကြောင်းသာမက သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သိန်းဖေမြင့်၊ သမ္မတ မန်းဝင်းမောင်၊ ဦးဥတ္တမ၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် များဖြစ်ကြသော ဦးထွန်းစိန်(သံတွဲ)နှင့် ဦးရာရှစ်၊ ပင်လုံစာချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးဖေခင်တို့အပြင် အမျိုးသား ကျောင်းဆရာကြီး ဦးရာဇတ် စသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အကြောင်းများနှင့် ဖ.ဆ.ပ.လ အဖွဲ့ကြီးနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင် ကွန်ဂရက် (ဗ.မ.က) ၊ YMBA၊ GCBA အသင်းများအကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြည့်စွက် ရေးသားသင့်ပါသည်။
ထိုအချိန်က လွတ်လပ်ရေး မယူလိုဘဲ ဗြိတိသျှတို့နှင့် ဓနသဟာရနိုင်ငံအဖြစ် ဆက်၍ တွဲနေလိုသော အုပ်စု၏ အမြှော်အမြင်ကြီးမှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုကာ သမိုင်းတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ပြ ရပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အကြံပြုလိုသည်မှာ သမိုင်းအမှောင်ချခေတ်မှ အလင်းခေတ်သို့ ပြောင်းစေရန် မြန်မာ့သမိုင်း ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ သမိုင်းနှင့် သတင်းအမှောင်ချ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် သတင်းစာ ဆင်ဆာအ ဖွဲ့ကိုလည်း အမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ် လူမျိုးရေး အဓိကရုန်းများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါသည် ခင်ဗျား။
၄။ ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာမွတ်ဆလင်များသည် အမေ့ခံ ပုံရိပ် မဖြစ်သင့်။
ဆိုလိုချင်တာက ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ (Transitional Period) အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ်ကာလ ကဲ့သို့ ဒုက္ခခံဖို့ ပြည်သူအားလုံး (Whole Community) ကို သမ္မတကြီးက ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော်လည်း အခွင့်အရေး (Privilege) ပေးဖို့၊ (ဝါ) အကာအကွယ် (Safeguard) ပေးဖို့ အချိန် ရောက်ရင် မြန်မာမွတ်ဆလင်များဟာ အမေ့ခံပုံရိပ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ သမိုင်းပုံရိပ် ဘယ်လိုဘဲ ကောင်းကောင်း နိုင်ငံအရေး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ကလည်း အရေးကြီး ပါတယ်။
လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော သမ္မတကြီး၏ ရခိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ ပထမ သဝဏ်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲ ပေးပို့လာသော သတင်းဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းကို တာဝန်မယူသော သမ္မတနှင့် သူ့ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏ နိုင်ငံကို ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ တာဝန်ယူနိုင်မှု နှင့် နိုင်ငံအရေး ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုပေါ် သံသယဝင်မိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများသည် ကွန်မြူနစ်ဝေါဟာရကို ငှားသုံးလျှင် ဖေါက်ပြန်တတ်သော သဘောရှိ၏။
စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဝန်ထမ်းများကို ရာထူးတိုးပေးရန်အတွက် ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်း ခံကြရ၏။ လွတ်လပ်ရေးကြိူးပမ်းမှုမှာ တာဝန်သိ သိပါခဲ့တဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကို ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် လို့ သုံးနှုံးပြီး ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကျေးဇူးဆပ်ဖူးတယ်။
နိုင်ငံတော်အာဏာ မရမီက ရိုဟင်ဂျာတွေကို မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန်နှင့် RNDP ဒေါက်တာ အေးမောင်တို့သည် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခြံခတ်ပြီး တတိယ နိုင်ငံကို တင်ပို့မယ်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
(၈) လေးလုံးဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သော မြန်မာမွတ်ဆလင်များကို မင်းတို့ ကုလားတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘာဆိုင်လို့လဲဟု စစ်ထောက်လှမ်းရေးက မေးမေးပြီးရိုက်၏။ မွတ်ဆလင် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်ကို ရည်ညွှန်းကိုးကား ဂုဏ်ယူပြောကြားသူများကို ပိုမိုနှိပ်စက်ခဲ့ကြ၏။ ယ္ခုအခါ ပြည်သူများဆန္ဒအရ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းသည်ဟု ကမ္ဘာကိုကြေငြာ၏။
၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလ ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနောက်ဖက်မုဒ်တွင် ဗိုလ်မှူးဘသော် (မောင်သော်က) ခြံရံလျှက် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ထိုအချိန်က စစ်တွေမြို့ ဆန္ဒပြမှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ဘူးသော ရိုဟင်ဂျာများကို ၂၄ နှစ်ကြာသောအခါ မေ့သွား၏။ အင်္ဂံလန် မြေပေါ်တွင် I don’t know rohingya ဟုပြောခဲ့ဘူး၏။
ဒီမိုကရေစီ ဘယ်တော့လောက်ရမလဲလို့ မေးတိုင်း အမေစုဖြေတာက တစ်မျိုးသားလုံးပါဝင်မှု (National Commitment) ကအရေးကြီတယ်၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီမိုကရေစီရဖို့ ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလဲ လို့ပြန်မေးလေ့ရှိတယ်။ NLD ကိုထောက်ခံပြီး အမေစုကို ဝိုင်းရံထားသူတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းသူတွေ အထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေ အများကြီးပါလို့ အမေစုအတွက် မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေဟာ အမေ့ခံပုံရိပ် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဆိုသူများသည် အသုံးချလိုသောအခါ ချွင်းချက်မရှိ ဖိတ်ခေါ်လေ့ ရှိကြပြီးလျှင် အခွင့်အရေးပေးရန်၊ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားစေရန်အတွက်မူ ဘက်လိုက်တတ်သည့် သဘောကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခဲ့ကြဘူးပါသည်။ (Political leader’s Invitation to whole community unconditionally in case of shortage but right and privilege to specific small group and bias afterward.) ဤသဘာဝကို Min Ba Din blog post တစ်ခုတွင်လည်း ဖတ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအဖြစ်မျိုး နောက်ထပ်မဖြစ်ရလေအောင် ကျွန်ုပ်တို့ ပခုံးပေါ်တွင် တာဝန်ရှိလာပါသည်။
၅။ လိုလျှင်တစ်မျိုး၊ မလိုလျှင်တစ်မျိုးပြော၏။
လဝက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ဘင်္ဂါံလီ ရိုဟင်ဂျာ များသည် ပြည်တွင်းမှာ အစဉ်အဆက် တစ်အိမ်တည်းနေ ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်လို့ ကုလသမဂ္ဂမှ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးရန် မလိုပါဟု သုံးနှုံးပြောဆိုဘူးပါသည်။
ထို့ကြောင့် လ.ဝ.က ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီပြောသည့် သွေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ပါသည်ဆိုသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားပြုမှု ဥပဒေအရ ရခိုင်နှင့် ညီအစ်ကိုတော်သော ရိုဟင်ဂျာများသည် အလိုအလျှောက် မွေးရာပါ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြ၏။ လ.ဝ.က ဝန်ကြီး တစ်ဦး၏ နုတ်ထွက်စကားသည် လူဝင်မှုဥပဒေနှင့် လိုက်လျှော် ညီထွေရှိသင့်သည်။
၆။ မြန်မာမွတ်ဆလင် သတင်းစာတိုက်နှင့် Islamic Bank တည်ထောင်သင့်သည်။
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်တိုင်း ထိုအထဲတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင်များ ပါ၊ မပါ မေးရန် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် မြန်မာမွတ်ဆလင် သတင်းစာခေါင်းကြီးလို၏။ တနည်းအားဖြင့် ဖေါက်ပြန်တတ်သော ခေါင်းဆောင်များနှင့် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသူများကို သတိပေးရန် သတင်းစာ အာဘော်သည် ကလောင် ထက်၏။ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသူများကို ရေလောင်းပြီး ပြောရန်လိုတယ်လို့ ၈ လေးလုံး မျိုးဆက် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဆို၏။
ဘာသာရေး။ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ကဏ္ဍအသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတိုက်များ တည်ထောင်ခွင့်ပြုနေချိန်တွင် မြန်မာမွတ်ဆလင် သတင်းစာ တိုက်ကို တည်ထောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိ၏။ ရိုဟင်ဂျာများကလည်း သတင်းစာထုတ်ဝေဘူးပါသည်။ ရည်ရွယ်သည်မှာ မြန်မာမွတ်ဆလင်များ အမေ့ခံပုံရိပ် မဖြစ်စေရန်ဖြစ်၏။
သတင်းစာအထိ မလှမ်းနိုင်မီ မြန်မာမွတ်ဆလင် မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဂျာနယ်တို့ ထုတ်ဝေနိုင်ရန် မျှော်မှန်း လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် အခွင့်အရေးပေးလျှင် အစ္စလာမ်တရားတော်နှင့် ညီသော ဘဏ်တစ်ခုစီ ဖွင့်သင့်သည်။ ထိုဘဏ်များမှရမည့် တရားတော်နှင့်အညီပေးသော အမြတ်ငွေများကို သုံးနိုင်၊ လှူနိုင်၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်၍ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်ကို ကောင်းစေမည့် ကိစ္စတစ်ခု ဟုမြင်ပါသည်။ ယ္ခုအခါ မလွဲသာမရှောင်သာ ဘဏ်နှင့်ဆက်ဆံ၍ ရလာသော အတိုးငွေများသည် စားမရ၊ လှူမရနှင့် မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့အတွက် အဟောသိကံ ဖြစ်ရ၏။
၇။ မြန်မာမွတ်ဆလင်များ၏ ပုံရိပ်ကို အမေ့မခံရလေအောင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပါ။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဘင်္ဂါံလီ ရိုဟင်ဂျာများသည် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ယတိဖြတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်လျှင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းကာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများကလည်း မြန်မာ့သမိုင်း၊ ရခိုင်အင်ပါယာ သမိုင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကို ယှဉ်တွဲလေ့လာရန်နှင့် ကမ္ဘာ့ သမိုင်း ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် လုံလောက်သော အချိန်ကာလတစ်ခုကို တောင်းဆို ပြီးနောက် မဲခွဲဆုံးဖြတ် လိုက်လျှင် အမှန်အကန်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး အဖြေကို ကျိန်းသေတွေ့မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည် ခင်ဗျား။
အမျိုးသားနေ့၊ ပထမကျောင်းသား သပိတ်နှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍ (Dec 7, 2012)
တောင်ကြီး အထက(၄) အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဆရာ/မ များအတွက် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ် (Dec 3, 2012)
သဲချောင်းဒုက္ခသည် စခန်းတွင် လုံထိန်းများမှ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှု့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (Dec 2, 2012)
သဲချောင်း မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် စခန်းကို အဓမ္မ ဖိအားရွှေခိုင်းရာ လက်မခံသဖြင့် ရဲများ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ် (Dec 1, 2012)
သရဝဏ်(ပြည်)၊ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ် နှင့် ရဲရင့်သစ္စာ၏ သစ္စာ (နောက်ဆုံးပိုင်း) (Dec 1, 2012)
စိတ်ခွန်အား ပြန်လည်ပြည့်ဝလာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် အကြောင်း (WORLD AIDS DAY အထိမ်းအမှတ်) (Dec 1, 2012)
ကမ္ဘာ့ အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ (Nov 30, 2012)
White Phosphorus(P4) သုံးတဲ့ ဗုံးအကြောင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ (Nov 29, 2012)
ကော့ကရိတ် ရေနံဆီကုန်း ဗလီ အား ဗုံးပစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် တရားခံ ဖော်ထုတ်ရေး နှောင့်နှေး (Nov 29, 2012)
ရခိုင်လူမျိုးတပ်ရင်းမှူး စစ်တွေ၊ သက္ကယ်ပြင်ရွာမှ မွတ်စလင်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေ (Nov 29, 2012)
This entry was posted on January 4, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, မှတ်စုမှတ်ရာများ, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← The Voice ဂျာနယ်နဲ့ ဗိုဟ်ချုပ်ဂွမ်မော် အင်တာဗျူး
လှေစီးပြေးရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ထိုင်း အစိုးရ နေရပ်ရင်း ပြန်ပို့မည် →